आज सूर्यग्रहण लाग्दै, ग्रहणको समयमा के गर्ने के नगर्ने ?जानकारीको लागि सक्दो शेयर गरौ !!::आर एम खबर
आज सूर्यग्रहण लाग्दै, ग्रहणको समयमा के गर्ने के नगर्ने ?जानकारीको लागि सक्दो शेयर गरौ !!
काठमाडौं– आज मंगलरबार सूर्यग्रहण लाग्दैछ । सूर्य ग्रहण रातिको समयमा लाग्ने भएका कारण नेपाल र दक्षिण एसियाली राष्ट्रबाट देखिने छैन । प्रशान्त महासागर र दक्षिण अमेरिकाबाट देखिनेछ । यो सूर्यग्रहण सवैभन्दा धेरै समय चार मिनेट ३३ सेकेण्डसम्म रहने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
कुन अंगमा भएको कोठीको संकेत के ?
सामान्यतया मानिसको शरीरको विभिन्न भागको कोठी देखिन्छ ।
धर्मशास्त्र अनुसार, शरीरमा हुने ती कोठीले राम्रो र नराम्रो दुवै फल दिन्छ । यसका बैज्ञानिक कारण नभएपनि धार्मीक रुपमा भने यसको महत्व रहँदै आएको छ । यहाँ हामीले त्यस्तै केही कोठीको चर्चा गरेका छौं । जुन कोठीले तपाईंको जीवन बारे कस्तो संकेत गरिरहेको छ त ?
– शास्त्र अनुसार, दायाँ आँखी भौँ भन्दा माथि र ओठ भन्दा माथि भएको कोठीले सुख वृद्धि गर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको दाम्पत्य जीवन समेत राम्रो हुन्छ ।
– बायाँ आँखी भौँमा आएको कोठी भने अशुभको लक्षण हो । त्यस्ता व्यक्तिहरुको दाम्पत्य जीवनमा नकारात्मक हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
– यदि गर्दन र काँध जोडिएको भागमा कोठी छ भने त्यसलाई पनि शुभ मानिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु कर्मठ र जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्षम हुन्छन् ।
– गलामा कोठी आएको व्यक्ति दीर्घायु र राम्रो आवाजको धनी हुन्छन् ।
– काखीमा कोठी हुनु पनि शुभ मानिन्छ ।
– नाकको अघिल्लो भागमा कोठी हुनेहरु भोग विलासमा अधिक रुचि राख्ने हुन्छन् ।
– नाकको दाहिने तर्फ कोठी हुनेहरु कम प्रयासमै अधिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन् । तर, नाकको देब्रेपटि कोठी हुनुलाई चाहिं अशुभ मानिन्छ ।
– खुट्टाको औंलामा आएको कोठी अशुभ मानिन्छ । यस्ता व्यक्ति स्वतन्त्ररुपमा जीवन यापन गर्न सक्दैनन् ।